Gaa ụwa na-aza ajụjụ na Exactamundo | Gam akporosis
Exactamundo: World Trivia Tour bụ egwuregwu na-atọ ụtọ Maka o na enye gi ohere isi na mkpanaka mkpanaka gi gaa n’uwa n’iile imata omenaala na akuko nke obodo obula. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị bụ Willie Fog na njem ya gburugburu ụwa na ụbọchị 80, na aha ọhụrụ a maka gam akporo ị ga-enwe ike ịmụ ọtụtụ akụkọ.
Otu n'ime omume ọma ya bụ izi ihe n’enweghị mbọ ọ bụla na ike ịgagharị gburugburu ụwa iji mụta nkọwa ndị ahụ banyere ọdịbendị dịgasị iche iche mejupụtara ụwa a. Egwuregwu efu na nke ị ga-eme njem na-enweghị ịhapụ ụlọ.
1 Onyeka Onwenu
2 Nweta ego iji gaa Exactamundo: World Trivia Tour
3 Learningmụ ihe mgbe ị na-egwu egwu n'asụsụ Spanish
Exactamundo: World Trivia Tour bụ karịa egwuregwu na-atọ ụtọ maka ọtụtụ ebumnuche. Nke mbụ, ọ bụ izi iheNke abuo, emeela nke ọma iji mee ka o doo anya na ha enweghị ezigbo echiche, mana enwere ihe ọzọ n’azụ aha gam akporo ọhụrụ a.
Anyị ga-amalite na United States na mata obodo na obodo ya nke ọ bụla ka mkpa. Obodo ndị a ga-emeghere anyị ụzọ izute ndị ama ama sitere na mba ahụ wee si otu a rụzue ọrụ dị iche iche ha gwara anyị mee. Kemgbe iwughachi Ncheta Washington, dị ka dayamọnd maka ama ama Marilyn Monroe.
Ya mere, anyị ga-eme njem iji mụta nkọwa gbasara obodo ọ bụla, ọ bụ ezie na ebumnuche nke ịkpata ego inwe ike ịga njem. Enweghị "ego" ị gaghị enwe ike ịga n'ihu, yabụ na obodo ọ bụla ị ga - enwe ụdị egwuregwu Trivia nke ị ga-aza ajụjụ na ọnọdụ nnwale.
Nweta ego iji gaa Exactamundo: World Trivia Tour
Echiche bụ na na Exactamundo: World Trivia Tour ị nweta ego ahụ ịza ajụjụ ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị daa na oge mbụ, ị ga-enweta ego ka ukwuu na ya ruo mgbe ịchọta azịza ziri ezi nke akwadoghị. Ego ahụ ga - enyere gị aka ịme njem ma si otú a kpọghee ozi ọzọ, ozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na Exactamundo: World Trivia Tour anyị na-ekwu okwu nke 120 dịpụrụ iche ịga ebe na ajụjụ 2.000 nwere ihe oyiyi na azịza sara mbara akọwapụtara kpam kpam na obodo ma ọ bụ mpaghara ebe anyị nọ. Nke ahụ bụ, ị ga-eleba anya n’ọdịbendị nile nke ụwa a maka ọ forụ gị.
Ga-agafe tupu ihe odide mara mma dika Lincoln, Ghandi ma obu Cleopatra. Ghaghi ichota ihe ndi ozo furu efu iji kọwaa ihe omimi nke uwa anyi. Egwuregwu nke anyị ji enwe ọ learningụ mmụta na nke ahụ, dị ka ngwa ndị ọzọ, otu esi eme jiri otu ebe a ka imuta Chinese, ma ọ bụ otu a egwuregwu ịmụta ihe omume, bụ ịmata otú anyị ga-esi jiri oge anyị na-eme kwa ụbọchị na-eme ihe bara uru.
Learningmụ ihe mgbe ị na-egwu egwu n'asụsụ Spanish
Ihe omuma adighi adi, dika ekwuru, ya mere inwere ike inweta obi uto egwuregwu na-adọta uche dị ukwuu na ntanetị anya. Ọ dị na Spanish, yabụ enweghị ihe ngọpụ ka ị ghara igwu ya, ma karịa ihe niile n'ihi na ọ ga-etinye gị na 3D ụwa ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ mpaghara, ihe ncheta ha, ihe odide na ihe ndị ọzọ na anya.
Nyochawa ya Exactworld bụ egwuregwu a na-arụ ọrụ nke ọma anyị na-egosipụta atụmatụ ụwa ka anyị wee mara ebe niile ọ dị. Ọ na-agagharị na 3D, yabụ na ọ naghị anọ na mba 2D maapu. N’aka ozo, obu otu n’ime ike nke egwuru-egwu a nke ha ruru oru karie iweta echiche n’adighi nma, kama ihe obula nke n’ile anya na teknuzu inwe ezigbo oru n’ile anya dika o na eme n’ime ya.
Exactamundo ị nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google ọ na-akụrịrị ụzọ ka inye gị ezigbo njem gburugburu ụwa. Ma site n'ụzọ, na n'ezie, ị ga-amụta ọtụtụ ihe ịmaghị na mbụ. Egwuregwu egwuregwu nke ọma nke Androidsis na-atụ aro maka ndị nne na nna ma si otú ahụ mee ka ụmụ ha mara ya, ebe ọ bụ na mmekọrịta na ahụmịhe bụ maka afọ niile.
Onye edemede: 71%
Onye edemede: 62%
Ọtụtụ puku obodo na mpaghara iji chọpụta
Ọdịdị ya dị mma
Malite na United States
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gaa njem gburugburu ụwa iji mara ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke mba ọ bụla na Exactamundo: World Trivia Tour